Uma kukhulunywa ngokuba ngumphathi wakho, iliphi isayithi elingcono? I-Flirtymania noma i-Patreon?
Qala Ukusakaza Kwakho
Enye indlela kaPatreon
Awudingi i-Harvard degree noma i-mile resume ukuze uphumelele. Ithalente lakho nobuciko bakho buzokhokha eFlirtymania . Noma ngabe yiluphi ulimi lwakho, ubudala, noma ithalente lakho, iFlirtymania ikhona ukukuxhasa.
Unganamatheli kumthombo owodwa wokukhokha njengoPatreon.
Njalo umzuzwana kuyabalwa
Thola umzuzwana ngamunye osakaza ku-inthanethi. Uma unezithameli ezijabule futhi zisebenzisana, bese ukhokhelwa ngisho nangaphezulu!
Ngabo bonke ababukeli nababhalisile, uthola okubhaliselwe okungu-100%!
Yiya ezingcingo ezizimele futhi wenze ukubulala ngomzuzu nomzuzu!
Thola ukubonga ngesimo sezipho
Ababukeli baqinisekisiwe ukuthi bazokubonga ngomsebenzi wakho ngokuchofoza okukodwa!.
Izithameli zakho zizokusiza ekusakazeni kwakho bukhoma lapho uphelelwa yimibono! Lapho usukulungele ukwenza umsebenzi lezo zinhlamvu zemali zizongena ku-akhawunti yakho.
Ungafinyeleli kwizimali zokubhaliselwe
Umdwebi ufanele imali ayilethayo . EFlirtymania uthola u-100% wemali yokubhalisa!
Lapho nje inani lokubhalisile selilungisiwe, uqala ukukhokhelwa. Awekho amakhomishini, akukho mali efihliwe, inkokhelo efanele kuphela!
Ungayenza kanjani inzuzo?
Ngokungafani noPatreon, uthola izinkokhelo eziyi-100% ngaphandle kwamakhomishini
Izinkokhelo ezingafika ku- $ 40 ngenyanga kusuka kokubhaliselwe okukodwa
Ungashintsha izilungiselelo zakho zeleveli kalula.
Yini ukwaneliseka kwabalobi?
Ibhonasi: xoxa nomhumushi ozenzakalelayo!
Ibhonasi: bhalisa ngokushesha ngokuchofoza okumbalwa!
Kuya ngokuthi uvelaphi, ungakhokhelwa ngezindlela ezifika kwezili-10 ezihlukile! Unganamatheli kuzingxenyekazi eziphazamisayo ezifana nePatreon lapho iFlirtymania ikunikeza konke ongakwenza!
Kungani ukhetha ukubhalisa okukhokhelwayo?
Uthola okuqukethwe kwekhwalithi ye-HD
Hamba ngencazelo ehehayo
Thola kalula amathegi afanele
Okungaxhunyiwe ku-inthanethi, ku-inthanethi, naso sonke isikhathi
Beka izithombe zakho ezishisayo, bhala izincazelo ezimnandi kakhulu bese uqala ukuthola imali engenayo!
Wonke umsebenzisi ukhokha ukubona izithombe zakho! Njalo ukubukwa okungu-50 kukhokhelwa insizakalo yeFlirtymania.
Yabelana ngezixhumanisi zeFlirtymania kuyo yonke imithombo yakho yezokuxhumana, umbuthano wabangane, nenethiwekhi yezobuchwepheshe futhi uhlanganyele nezithameli ezinkulu kunakuqala !.
IFlirtymania ikunikeza inkululeko yokudala yetimu yokusakaza ukusakaza kwakho ngendlela othanda ngayo! Noma ngabe ingubo entsha, ukulingisa, noma isizinda, qamba ubuciko! IFlirtymania ngeke izame ukucwaninga noma ukunqande inqubo yakho yokudala nganoma yisiphi isikhathi!.
Uzithole ungenasikhathi sokuzivocavoca umzimba? Qala ukusebenza nokuhola izinhlamvu zemali!
Umbukiso wento eyenzekayo
Letha ababukeli empilweni yakho yansuku zonke! Babonise nxazonke, hlanganisa ababukeli bakho futhi uthole izinhlamvu zemali !!
Phatha ababukeli bakho kanye nawe ngokuluma ngokusebenzisa ukusakaza bukhoma okugxile ekudleni!
EFlirtymania ungaqala ukusakaza bukhoma ngokuchofoza okumbalwa nje! Ayikho inqubo eyinkimbinkimbi noma izinyathelo.
Umhumushi ozenzakalelayo owakhelwe ngaphakathi
Ungalwi nesichazamazwi, vele uhumushe ngokuzenzakalela wenze wonke umsebenzi!
IFlirtymania inikeza inkululeko nokunethezeka kokusakaza kusuka kumadivayisi namasayithi amaningana ngasikhathi sinye!
Sebenzisa i-VISA, i-Mastercard, i-PayPal, i-Yandex, i-QIWI, i-SEPA, izinsiza ze-Bitsafe noma uthole i-invoyisi yokukhipha imali engaphezulu kwama- $ 30 ngosuku!
Thola i-100% yemali yakho engenayo kuFlirtymania .
Kuphephile futhi akaziwa
IFlirtymania iyasiqonda isidingo somsebenzisi sobumfihlo. Uma ungeneme ngezinga lobumfihlo onalo, shintsha amasethingi avumelane nezinga okhululeke kakhulu ngalo. EFlirtymania, akudingeki ulwe kanzima ukuthola ubumfihlo obufanele ngokufanele ..
Dala ukufihla okuhle, uthole imaski epholile, bese ukhetha isidlaliso esiyinqaba bese usethelwe!
Ungasikholwa, zihlolele lezi ezimbili! Thola izinketho ezinhle kakhulu kuFlirtymania!